Lapho ukutayela wezigqoko ekwindla-ebusika futhi iba umbuzo efanele ukukhetha jikelele outerwear okungatholakala igqoke nsuku zonke, futhi ukuzivumelanisa endabeni ethile. Semvu ngokugcwele lo isimo. Ebusika, izingubo ezinjalo ngeke nje bheka stylish, kodwa futhi bazizwa zifudumele futhi zithokomele. Uma le ngxenye ukukhetha ikhabethe, yonke into icacile, kukhona langempela umbuzo olandelayo: "Yini ukugqoka amajazi" Hlaziya amathuba ngokuningiliziwe.
Kusukela sizogqokani amajazi eside
Lena esisebenzayo kakhulu futhi ukhululekile kukho onobuhle. Ubude ikuvumela ukugqoka ijazi ngesikhumba semvu cishe kunoma iyiphi izingubo, ngoba ngalé isivele eyakhelwe. It kuphela uhlala ukukhetha izicathulo ilungelo kanye izesekeli, kuncike isiqondiso yesithombe. I elula kunazo kungaba inhlanganisela owufanelekela ngalé ingubo. Yena kubhalansisa bezibona ivolumu namabhantshi eside. Obuhle outerwear uyobheka ibhande, ngoba le-accessory unamathele ngalé kwezindaba nesifazane. A encane noma naphakathi esikhwameni-bamba (noma imodeli phezu kwehlombe) organically angena eqenjini lomculo, egcizelela obugagu imininingwane. Yini ukugqoka amajazi obuphelele enjalo, futhi uma kwenzeka ngokushesha, omunye njalo: kuzodala induduzo efudumele, ngisho noma uzolisebenzisa phezu izingubo sasivumela ukukhanya. Lona omunye izinzuzo ebaluleke kakhulu stylization.
Kusukela sizogqokani amajazi iDemo naphakathi sobude
Kulokhu, kukhona kunikwa ematfuba lamanyenti uzizamele izicathulo kanye ingxenye phansi eqenjini lomculo. Bayoba evuleleke emphakathini. Kuye amajazi ngobuningi ukudala ngezabelo olinganiselayo uvumele kufaneleka, owufanelekela noma okuxekethile phansi. amabhuzu High ezimboze ngamadolo, ukunikeza ithuba uzame isiketi esifushane noma izikhindi efudumele. Sivula imilenze, futhi ngenxa yalokho impikiswano ebalulekile iwukuba ukukhetha umbala kwesokudla tights. Kungenzeka hlangothi - black noma mpunga, bese bangaba njengabantu elijabulisayo Ensemble. Nge jeans khulula noma ifomu esinamathelayo nebhulukwe sizobukeka sisihle Ugg Boots, amabhuzu besiyoba sikhulu noma amabhuzu iDemo. I abatelekile isithombe njengabesifazane uzozijayeza isiketi isikhathi eside amabhuzu kwi yedwa flat kanti isithende ongaphakeme ububanzi. Mahhala ingubo ingubo isilinganiso obuphelele kuze kube noma ngezansi kwedolo futhi ukulingana ngalé khulula. Kusukela sizogqokani amajazi esifushane, kuyokhanya uma wazi umthetho elula: ivolumu kanye phezulu owufanelekela noma phansi efanelekayo. Le nhlanganisela enemisebenzi uyonikeza ithuba uzizamele izithombe ezintsha kaningi.
Imithetho stylization brown semvu
Traditional umbala kukho akusoze emfashinini sibonga kwedivayisi zalo ezinhle nabanye shades. Brown kuyinto jikelele. Lenza kahle omnyama oyisisekelo, ezimhlophe futhi ngimpunga, kungekho ngaphansi umphelelisi ngempumelelo okwesibhakabhaka, oluhlaza okotshani, osawolintshi, okhakhi, cherry noma obomvu. Udinga landela umthetho elula: elilodwa noma amabili ayinhloko imibala aphelele kule Ensemble. ngendlela elula futhi ekhululekile ngesitayela abayitoho ngeke ufane amajazi ensundu jeans okwesibhakabhaka, amabhuzu noma uggami. Libuye efanelekayo okuxekethile ijezi ezinkulu wathungela umbala noma turtleneck ngemuva. Dress izibambe imibala kahle misa nenhle amajazi ensundu. Ngohlelo okunjalo ukulingana izesekeli nesibindi sokushumayela. Kusukela sizogqokani amajazi nsundu izithombe kwansuku, ukutshela kwemizwelo futhi imithetho eyisisekelo kwedivayisi imibala. Yakha elilodwa noma amabili eqenjini lomculo ezicabangwayo wonke isizini, futhi Kuyohlale kunento ukugqoka esimeni esiphuthumayo, lapho kungekho ukuchitha umzuzu nje owodwa owengeziwe ulungele.
Imithetho eliqoshiwe amajazi amnyama
Classic futhi enza izinto ezihlukahlukene black ikuvumela ukuba "alulaze" wena yimuphi nangezindlela ezihlukahlukene umbala. Kufanele kuthathe ithuba uzame izithombe ezintsha futhi original. Kuyafaneleka pastiche amajazi amnyama efanayo umbala ibhulukwe kanye nezicathulo endaweni egqamile ithoni ijezi. Okuhle uyobheka claret, Marsala, lwesinaphi, onsundu kanye nezinye ekwindla-ebusika shades. Ziyamangalisa kuyoba inhlanganisela kokuqhathanisa: omnyama nomhlophe. Lwenza isimo ka Iphalethi oluluhlaza, shading kungemuva elimnyama. Grey tinting ukuhlukahluka ahlukahlukene kungafaneleka ukuba umphelelisi isithombe ehhovisi nge amajazi amnyama. Kuwufanele ukusebenzisa inhlanganisela ukwakheka kanye izesekeli, ukushaya umbala hlangothi futhi usinike Chic nangobuciko. Kusukela sizogqokani amajazi amnyama, umbala ogqamile futhi izinwele kanye anemibala ayethanda makeup. Nezingubo kufanele agcizelele izinzuzo ukubukeka badonsele ukunakekela ke kwasekuqaleni.
Kusukela sizogqokani amajazi anemibala
Ngo ngokwalo, lokhu kakade yingxenye esemqoka aspect Ensemble. Ingabe kuphela umphelelisi ngomongo walo stylish. Ukuze ugcine ibhalansi, zishaya anemibala semvu zokugqoka imibala hlangothi ezifana black, beige, onsundu, ubisi, emhlophe, empunga. Uzizamele ukwakheka. Ukuze onesibindi futhi wethemba umuzwa wakhe isitayela inikeza ithuba thatha izingubo nombala ofanayo, kodwa kangako noma ukuqinaqina. Kulokhu, izesekeli nezicathulo kumelwe livinjwe futhi singathathi hlangothi. Ethandwa kakhulu okwesibhakabhaka, oluhlaza okwesibhakabhaka, obomvu, burgundy, shades ophuzi umbala amajazi. Lapho ingemuva kokungathathi hlangothi uzogcwalisa phezulu njengoba umnqwazo elikhanyayo. Yini ukugqoka amajazi nesinye salezi imibala, ngokushesha kanye nesitayela futhi inguqulo yakamuva ye-ubude.
Indlela ukukhetha isigqoko
Kuye kukhethwa isitayela - ibhizinisi, abayitoho, nenhle - futhi ukhetho abakhethiwe sesembozo. Kubonakala kuhle semvu coat ne beanies wathungela njengoba mncane futhi voluminous. Neat wawungathi izigqoko ngamasimu ebanzi ezithambile ubufazi isithombe. Berets, Beret, scarves, bandanas kanye amabhande asekhanda ngeke ukukhuluma ngesimo zokudala futhi okungavamile. izigqoko Fur zilungele lapho zifakwa ngalé outerwear. Okusanda Snudy owawuthandwa, angasetshenziswa njengoba umnqwazo ngobuningi. Ngokukhetha yokugcina, njalo bacabanga phezu bezibona volumetric we Ensemble. Yini umnqwazo ezigugile amajazi, tshela isitayela sakhe. Nge khulula izingubo engenhla kungcono ukuhlala izinguqulo Lihle futhi njengabesifazane. Nge amajazi ifomu esinamathelayo, ungakwazi ukuhlola enkulu ekukhethweni kuka-izigqoko ngobuningi.
Yini izicathulo ukugqoka amajazi
Fashion outerwear usetha imibono isitayela izicathulo. ngalé okuqinile zidinga anezele ngesimo amabhuzu, amabhuzu isigamu esithendeni ububanzi, iqakala, Lihle izicathulo unisex. isithombe Okuvamile unika Igumbi esengeziwe zokucwaninga. Umumo ikhulisa ukukhetha Ugg, Dutikow, ezemidlalo amabhuzu efudumele, cowboy amabhuzu noma "upland" nesitayela. Kamnandi kuhlangene semvu izicathulo ne noboya ifaka i-design efanayo. Kungaba njengoba isithende, kanye ematheni flat. Umbala elilungile kakhulu kuyinto izicathulo omnyama, onsundu, oluhlaza okwesibhakabhaka kanye lwesinaphi. It azokusizana Ensemble. Ukuze phezulu umbala ingacosha phansi efanayo, noma ukudlala ezingafani. Okumibalabala ichaza inhlanganisela ngokwayo semvu elingenamikhono. Kusukela sizogqokani (Photo ezahlukene iminsalo ungabona esihlokweni) ukuthi umkhuba ingxenye ikhabethe ngenkathi yasekwindla-ebusika 2017 futhi sizokhuthaza uchungechunge izitayela fashion futhi zisho amazwi ezivela catwalks.
Indlela sithathe ijazi isikhwama semvu
Nge ngobuningi amajazi uyobheka ezinhle njengoba isikhwama big: kuyokwenza ngalé olinganiselayo. Ukuze izenzakalo ezibalulekile kungafaneleka ukuba bamba ezincane, isibonelo, nge noboya ifaka, okuyinto ebaluleke for wamanje imfashini isizini. nojosaka Popular umphelelisi amajazi esifushane noma naphakathi sobude, ukudala ngendlela ekhululekile ngesitayela ezikhululekile. Ngo kubanda, izikhwama adumile ushiye izandla zakho zikhululekile, ngakho naphakathi bag ehlombe ukuze kuxazululwe le nkinga. izikhwama ukuhamba Site ibhizinisi isitayela, izikhwama zezincwadi, "izimvilophu". Yini ukugqoka nge semvu - ukutshela umcimbi isitayela kanye nemisebenzi. Khetha esisodwa kubagibeli nsuku zonke, futhi izinguqulo eziningana "isimo", umphelelisi izithombe.
Noma kunjalo luyobe lungaphelele ngaphandle ifaniswe kahle izingxenye aphelele. Lezi zihlanganisa izigqoko, scarves, amagilavu, izikhwama, amabhande, ubucwebe. Kukhona iqoqo imibono umbala ucwaningo. Scarves noma Snudy kuzodala esiqinile noma ekhululekile kwemizwelo isitayela nangezindlela. Ofeleba nasemakhazeni efudumele element uzokwenza ukuba khona noma ukungabi khona bezibona nomthamo ngalé. Amagilavu noma amagilavu uzomisa isimo jikelele. Waba yini isigqoko ukugqoka amajazi? Impendulo yombuzo incike isiqondiso jikelele umnsalo. imininingwane wathungela bheka khulula kakhudlwana futhi ekhululekile. I zifakwa uma semvu elingenamikhono, "hourglass" UMFANEKISO okhangayo kuzodala ibhande ububanzi. Glamour nangobuciko engeza imihlobiso, namacici, izindandatho namasongo. Bazophinde isithombe nenhle kakhulu futhi zemikhosi.
Ukuthola semvu linikeza amathuba ukutayela izithombe ezintsha ebusika. Bheka izitayela fashion kusuka fashion imibukiso kwesizini, uziqaphele imibono ezibalwe ngenhla, cabangela siqu ukunambitheka izintandokazi zakho bese uba entsha elikhanyayo umklami ensembles.
I-psychology yezokwelashwa. Izinkinga zentuthuko yanamuhla
Indlela ukuze alulame iphasiwedi yakho Mile